Famakiana soavaly sy ny hazakazany amin'ity dingana mampiavaka ity | Soavaly Noti
Jenny monge | | soavaly, Fifaninanana soavaly, Karazan-tsoavaly
Ny mpitaingin-tsoavaly sasany dia nantsoina hoe mandeha amin'ny toetra mampiavaka azy trot izay nahasarika mpankafy maro mba hampitoviana fanatanjahantena sy mpiompy. Izany no nahatonga hanomboka hotadiavina ny karazan-java-maniry izay manana ny trot. Ireo hazakazaka ireo dia niafara nantsoina hoe hazakazaka Trotter na soavaly fitetezana tratra.
Ny tontolon'ny fanatanjahantena Equine dia tsy niandry ela ity dingana mampiavaka ny hazakazaka ity, izay ipetrahan'ny mpamily ao anaty fiara maivana na eo ambadiky ny biby.
Amin'izao fotoana izao dia manana a malaza be any amin'ny Nosy Balearic sy any Frantsa. Te hahafantatra bebe kokoa momba azy ireo ve ianao?
Alohan'ny hidirantsika amin'ny tontolon'ny hazakaza-trotter dia andao hofantarina tsara kokoa ireo equine ireo.
Trotters any Espana dia tsy dia fantatry ny besinimaro izy ireo, na eo aza ireo mpankafy lehibe misy any amin'ny Nosy Balearic. Ity fialamboly ity dia natomboka tamin'ny kopian'ny soavaly mitaingina tratra sy angano Anglo-Norman. Ity iray ity Io no fototry ny hazakazaka espaniola espaniola, izay nampiana ny fototarazon'ny sokajy anglisy, ny Norfolk Roadster ary ny soavaly espaniola, holandey ary danisy samy hafa avy eo.
Na eo aza ny hazakazaka Namboarina ho an'ny hazakazaka fitsangantsanganana, hita fa ilaina amin'ny asa eny an-tsaha.
Hosokafantsika ny vavantsika amin'ny horonantsary misy hazakazaka atao any Palma, izay ahafahanay mankasitraka ny fandalinan'ireto mpitaingin-tavy ireto:
Amin'ny maha-te hahafanta-javatra azy dia misy hiran'ny ankizy espaniola miresaka momba ny soavaly mitaingina tratra.
1 Tahaka ny inona ny espaniola Espaniola?
2 Inona no atao hoe trotters frantsay?
3 Fihodinana harness
3.1 Fihodinana gadona
3.2 Trotter racing any Espana
Tahaka ny inona ny espaniola Espaniola?
Trotters Espaniola, miaraka amin'ny haavony eo amin'ny 150 eo ho eo amin'ny 170 cm eo ho eo, dia biby be vatan, misy lamosina sy soroka matanjaka. Manasongadina ny rump somary oblique. Lava sy matanjaka ny rantsany. Izy ireo dia tongotra-tongotra, toetra iray amin'ny karazana hafa dia heverina ho kilema. Manana maso lehibe sy velona koa izy ireo.
Mikasika ny volony, dia mazàna izy ireo sosona toy ny chestnut sy chestnut. Indraindray dia azo atao ihany koa ny mahita kapoty volondavenona sy mainty, misy marika fotsy madinidinika amin'ny rantsam-batana na amin'ny loha.
Ankoatry ny fitoviana tena manan-tsaina, mahay mandanjalanja izy ireo ary manana toetra mendrika.
Inona no atao hoe trotters frantsay?
Manana haavo amin'ny 160cm eo ho eo izy ireo. Izy ireo dia mitovy Miorina mafy sy mafy orina, miaraka amin'ny foibe misahana ny hozatra sy valahana fohy. Lava sy matanjaka ary mahery ny rantsambatana.
Manana toetra tsara izy ireo, izay tena ilaina amin'ny fanatanjahantena.
Ny volon'izy ireo mazàna dia manana palitao miloko bay, chestnut ary chestnut.
Ity karazana hazakaza-tsoavaly ity dia tanterahina amin'ny alàlan'ny fananganana ny mitovy amin'ny mandeha manokana na ny lalan-kaleha, raha misintona solika (sarety misy kodiarana roa). Misy maningana toa any Frantsa izay matetika mampiasa fiara fa ny lasely.
Ny toerana tsirairay dia samy manana ny fitsipiny momba io karazana asa io. Any Harness (Amerika Avaratra), voafetra amin'ny soavaly Standardbred izy ireo. Ireo equines ireo dia voatonona anarana satria afaka mihazakazaka hazakazaka iray kilaometatra izy ireo amin'ny fotoana mahazatra. Izy ireo dia mitovy amin'ny toetra tony, izay manana tongotra somary fohy kokoa noho ny bredsbreds sy ny vatana matanjaka kokoa.
Ireo hazakazaka ireo dia misy paikady sy haingam-pandeha bebe kokoa noho ny sisa amin'ny hazakazaka. Afaka tanterahina izy ireo rivotra roa samy hafa: jogging na hafainganana. Mpihazakazaka iray mivezivezy ny rantsany eo anoloana amin'ny tsiroaroa diagonaly. Etsy ankilany, ny soavaly manana gadona dia mampihetsika ny rantsany any aoriana. Any Eropa dia matetika no mihazakazaka any amin'ny lalana fotsiny ny hazakazaka, raha any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao dia azo tanterahina ihany koa ny gadona.
Amin'ny maody gadona, ny soavaly dia tsy dia mirona firosoana firosoana satria matetika mitondra otrika na hidy mampifandray ny tongotra. Ary koa, ny gadona dia dingana voajanahary ho an'ny equines maro.
Ny mpamily mahamenatra dia mitondra karavasy ampiasainy hanondroana ny soavaly amin'ny fikitihana sy fanaovana tabataba amin'ny hazo. Na izany aza, voarara ny karavasy amin'ny tany sasany, toy ny any Norvezy.
Ny fanatanjahan-tena amin'ny valin'ny jogging liana be any Frantsa, izay itaizan'izy ireo haingana ny soavaliny. Ireo soavaly ireo dia ampiasaina amin'ny trotting, fifaninanana amina lasely ary miaraka amina harnesses.
Trotter racing any Espana
Ireo hazakazaka any amin'ny saikinosy ireo dia natao indrindra tamin'ny làlam-panjakan'i Mallorca, Menorca ary Ibiza, izany hoe any amin'ny Nosy Balearic.
Menorca dia mifandray akaiky amin'ny equines. Ny hazakazaka trotter dia atao ao amin'ny Pacecourse misy azy any Mahón isaky ny asabotsy amin'ny volana fahavaratra ary amin'ny alahady amin'ny volana ririnina.
Tao amin'ny Hippodrome an'ny Citadel, avy any Menorca koa, aiza Ny fifaninanana trotter voalohany dia natao tamin'ny 2 Jolay 1071. Ny hazakaza-tsoavaly koa dia tanterahina amin'ity hazakazaka fifaninanana ity manomboka amin'ny Febroary ka hatramin'ny Oktobra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Mamily soavaly sy ny hazakazany